Sina: Mandranitra ireo olom-pirenena any Guangzhou ny soso-kevitra hampiasàna bebe kokoa ny teny Mandariny amin’ireo fandaharan’ny fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2010 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Tianhe any Guangzhou; sary nalain'i ASDFGHJ avy eo Baiyun Shan
Nisy soso-kevitra vao haingana amin'ny hampiasàna indray ny teny Mandariny fa tsy Kantone intsony any amin'ireo fandaharam-baovao amin'ny fahitalavitra any Guangzhou, renivohitry ny faritany Sinoa Guangdong, dia nolavin'ireo mponina ao an-toerana mafy. Ilay soso-kevitra, izay natolotra nandritra ny Fivoriam-be n'ny Kaoferansa Filankevitra ara-Politikan'ny Vahoaka Sinoa nataon'ny Komitin'ny tanàna Sinoa tamin'ny 5 Jolay, dia mangataka ny hampiasain'ireo fahitalavitra any Guangzhou bebe kokoa ny teny Mandariny any amin'ireo fandaharam-baovao na mamorona fantsona fahitalavitra vaovao amin'ny teny Mandariny. Ji Keguang, mpikambana iray ao amin'ny komity, dia niteny fa io soso-kevitra io dia hanampiana ireo mpitsidika tsy mahazo ny teny Kantone mandritra ireo Lalao Aziatika, izay hatao any Guangzhou manomboka amin'ny 12 Novambra hatramin'ny 27 Novambra.
Nampiseho ny fitsampan-kevitra amin'ny aterineto tao amin'ny vohikalan'ilay komity, izay novalian'ny olona maherin'ny 30 000 izay teratany Guangzhou ny roa ampahatelony, fa ny 80% dia mandà ilay soso-kevitra. Maro amin'ireo mpanohitra no manahy fa hampitahotra ireo Kantone sy ireo kolotsaina eny an-toerana mifandraika aminy izany fiovàna izany. Nanomboka tamin'ny 1988, nomena alalana ireo foibem-pahitalavitra any Guangzhou hamoaka fandaharana amin'ny teny Kantone mba hifaninana amin'ireo fandaharana amin'ireo fahitalavitra avy any Hong Kong, izay mampiasa ny Kantone amin'ny ankapobeny. Raha tsy maintsy mampiasa ny teny Mandariny ireo fandaharana any amin'ireo faritra hafa any Sina, ity ‘zo manokana’ zakain'i Guangzhou ity kosa dia nanamafy ny maha-izy azy, araka ny ambaran'i Shen Ping, mpanao gazety ao amin'ny BBC.
Nisy matoan-dahatsoratra iray tao amin'ny Nanfang Daily, gazety mivoaka any Guangzhou, manasongadina ny lanjan'ny teny Kantone amin'ny maha-lova ara-kolotsaina azy:
Raha hanohitra ny soso-kevitry ny komity ihany isika, tokony hanasongadina ny fiarovana ny teny Kantone amin'ny maha-lova ara-kolotsaina azy. Tokony hotakarina izany. Fanampin'izay, tsy ampahany ara-kolotsaina ihany ny teny Kantone, fa ampahany amin'ny fiainana andavanandron'ireo mponina any an-toerana ihany koa. Noho izany dia tokony hanana andraikitra lehibe eo amin'ny sehatry ny fahitalavitra ny teny Kantone, fantsona manan-danja indrindra eo amin'ny haino aman-jery. Ny fanesorana ny teny Kantone amin'ireo fandaharan'ny fahitalavitra dia tsy vitan'ny hoe fanapotehana ny fiteny ao an-toerana ihany; fa fanalàna amin'ireo olom-pirenen'i Guangzhou ny fomba fiainany mahazatra koa. Raha manaja an'i Guangzhou sy ny fombam-piainany isika, tsy tokony hanao izany fiovàna izany an-kahamehana.
Tsy mpifahavalo ara-kolotsaina ny teny Kantone sy ny teny Mandariny. Ny fiarahan'izy roa miaina dia vokatry ny fandraisana maharitra nisy teo amin'ireo kolotsaina any an-toerana, ny fiarahamonin'ny sivily, ireo hetsiky ny governemanta ary ny finiavan'ny vahoaka. Ny fifandanjàn'ny fandaharana amin'ny teny Mandariny sy Kantone ankehitriny dia tsy mifototra amin'ireo raharaha eo amin'ny asa fanaovan-gazety ihany, fa amin'ny vokatr'ireo fifandraisana voalaza tetsy ambony ihany koa, ary tsy tokony hovaina mora foana. Any anatin'ireo tranga isan-karazany, toy ny fidiran'ireo mpifindra monina mankao Guangzhou, na ny fanaovan'i Guangzhou dokambarotra ny hatsaràny, tsy mbola fahavalon'ny teny Mandariny mihitsy ny teny Kantone. Ny famoronana fifanoherana ivelany [artifisialy] toy izany dia tsy hanao afa-tsy ny handratra ny fon'ny andaniny roa.
Malaza amin'ny fomba fiaina mahafinaritra, malalaka ary miray hina i Guangzhou. Fantatra amin'ny kolotsaina Lingnan voatahiry manontolo ihany koa izy. Tsy tokony hohambaniantsika ny anjara asan'ny teny Kantone amin'ny maha-marika sy fanahin'ny tantara sy zava-misy any Guangzhou azy. Sarotra ny mieritreritra fa mbola hirehareha amin'ny tenany i Guangzhou raha hofoanana ny teny Kantone. Tsy ho lasa lavitra i Guangzhou raha mandao ny fanahiny sy ny tenim-pireneny. Tokony hatsahatra ireo fifanelingelenana tsy misy dikany, ary hatoky fa afaka miara-miaina any Guangzhou ny teny Kantone sy Mandariny.
Maro koa ireo matihanina amin'ny haino aman-jery avy ao Guangdong no miahiahy momba ny fihenan-danjan'ny teny Kantone. I Chen Yang, ohatra, matihanina iray amin'ny haino aman-jery:
Hisy fahabangàna amin'ny fahitalavitra any Guangzhou! Isaky ny tenim-paritra foanana dia misy kolotsaina atao an-jorom-bala.
Wang Yan, mpanolotra ny vaovao ao amin'ny fahitalavitr'i Guangdong:
Maneho kolotsaina ny tenim-paritra. Tokony hiaro ny teny Kantone ny olom-pirenena rehetra ao Guangzhou .
Ireo mpaneho hevitra avy any amin'ireo farira hafa any Sina kosa dia milaza fa nitarin'ireo olom-pirenena ao Guangzhou ny olana. Ho azy ireo, ny tanjon'ny soso-kevitra dia tsy ny hanamaivana ny Kantone, fa ny hanamora ireo fifandraisana sy ny fampandrosoana an'i Guangzhou, izay avy amin'ireo faritra hafa any sina ny roa ampaha-dimin'ny olom-pirenena ao aminy.
I Rong Guoqiang dia manoratra ao amin'ny Qian Jiang Evening News:
Ny fahitalavitr'i Guangzhou dia manana fantsona sivy ahitàna ny ankapobeny, ny vaovao, ny sarihimetsika, ny toe-karena, ny teny Anglisy, ny fanatanjahantena sy ny ankizy. Amin'ny teny Kantone no amoahana ny ankabeazan'ireo fandaharana. Ny soso-kevitra dia mangataka ny hampiasàna ny teny Mandariny amin'ny fotoana be mpijery ho an'ny fandaharana ankapobeny sy ny vaovao. mazava tsara izany: ankoatra ny eo anelanelan'ny 12 ora – 2 ora atoandro sy 7 ora– 10 ora alina, mbola azo ampiasaina amin'ny fotoana hafa toy ny taloha ny teny Kantone. Tena ‘faharesen'ny teny Kantone ve izany? Tena misy antony lehibe tsy maintsy ‘hiarovana’ azy ve?
Na dia hofoanana daholo aza ireo fandaharana amin'ny teny Kantone, tsy hanjavona ny tenim-paritra. Satria mbola ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ny teny Kantone. Ny tenim-paritra dia tsy hanjavona raha tsy noho ireo fiovàna ara-toekarena misoko mangina sy mahazatra, ara-kolotsaina ary ara-mpifindramonina.
Ao amin'ny Renmin Net, i Zhang Junyu, mpampiasa aterineto dia mieritreritra fa, satria tratran'ireo faritra hafa ao Sina ny fandrosoan'i Guangdong ara-toekarena, tsy maintsy hanova ny fomba fisaina ny ‘zo manokana’ ireo olom-pirenen'i Guangzhou, izay manamafy ny voalazan'i Shen Ping, mpanao gazety ao amin'ny BBC, voalaza tetsy ambony.
Manome fahatokisan-tena ho azy ireo hiaro ny teny Kantone ny fiahavitrihan'ny toekarenan'i Guangzhou tamin'ny taona 1980. Ankehitriny, nahatratra an'i Guangzhou ireo faritra hafa ao Sina, ary efa mahazatra koa ny fidiran'ireo mpifindra monina ao amin'ny firenena. Ny fahaverezan'ny voninahitra amin'ny fahombiazana ara-toekarena, ny fandàvan'i Guangzhou hampiasa ny teny Mandariny dia azo lazaina ho safidy ara-psikolojika ihany.
Ny tanjona amin'ny fampiasàna ny teny Mandariny dia tsy ny hanimba tenim-paritra akory, fa ny hanamora ny fifandraisana. Any amin'ireo toerana maro toa an'i Shanghai, Sichuan ary Shanxi, voaaro tsara ireo tenim-paritra any an-toerana ary tsy mifanolana amin'ny famoahana fandaharana amin'ny teny Mandariny. Tsy misy tokony hanaovan'i Guangzhou adihevitra momba izany. Any Guangdong, ny teny Kantone no ampiasaina amin'ny ankapobeny any amin'ny onjam-peo, fahitalavitra ary na any amin'ireo dokambarotra anaty fiara fitateram-bahoaka aza. Miteraka olana ho an'ireo olona avy any amin'ireo faritra hafa any Sina izany, ary manakana an'i Guangzhou tsy handroso ho lasa tanàn-dehibe.
I Cao Jingxing koa, mpaneho hevitra avy ao amin'ny Xinmin Net dia manoro ireo olom-pirenen'i Guangzhou hahiratra kokoa:
Tokony ho an'ireo olom-pirenen'i Guangzhou ny manapaka na ny teny Kantone no ho ampiasaina na ny teny Mandariny. Tokony hampifandanja ny fanamoràna ny fampandrosoana sy ny fitandroana ny kolotsaina any an-toerana izy ireo fa tsy hanodinkodina ny lafiny iray. Raha manasongadina ny fampandrosoana loatra izy ireo ka tsy hisy intsony hiteny Kantone, dia hanimba tokoa ny tenim-paritra any an-toerana izany. Amin'ny lafiny iray, raha diso miaro ny teny Kantone loatra ry zareo ka hihena ny zotony hifaninana, ry zareo ihany no ho voan'ny ataony.
Na eo aza izany, tsy ny rehetra no miombon-kevitra fa mila fampiasàna ny teny Mandariny ny fanamoràna ny fifandraisana. Manoratra i Han Yimin, mpitoraka blaogy:
Mitaky ny fanimbàna ny tenim-paritra eo an-toerana ve ny fanatontoloana sy ny fananganana orinasa? Maro ireo olona no manome lanja ambony ny teny Mandariny amin'ireo fifandraisana sy fifanakalozana ara-toekarena. Mieritreritra mihitsy aza ry zareo fa mifanipaka ny fampandrosoana ara-toekarena sy ireo tenim-paritra ampiasaina. Izany no vokatry ny finoana tsy ampy fandinihana ireo fampielezan-kevitra. Zava-dehibe ny teny iraisana amin'ireo fifanakalozana eo amin'ny samy olona. Nefa inona no vokatry ny fampiasàna tenim-paritra samihafa eo amin'ireo fifandraisana ara-toekarena any Sina izay ampiasàna laha-teny mitovy fanoratra? Toa tsy nisy na iray aza nanao karoka lalina tamin'io sehatra io. Mino aho fa afaka mampiasa fomba maro hifandraisana amin'ny hafa ny olona. Raha mbola mila mifandray ny olona dia tsy maintsy hikaroka fomba hifankahazoana. Iray amin'izy ireny ihany ny teny Mandariny, ary tsy izy no tena lehibe indrindra. Porofon'izany ny tsy nanakanan'ny fisian'ireo tenim-paritra maro samihafa ny fivelaran'ny kolotsaina Sinoa nandritra ny taona an'arivony. Amiko ny fampiasàna ny teny Mandariny tsotra dia fanapahan-kevitra jadona noraisin'ny fitondràna Sinoa ankehitriny, tsy dia misy tohana mitombina loatra. Eritrereto ireo olo-manga tamin'ny tantaran'ny Sina tamin'ny vanimpotoana niainany – Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong ary Deng Xiaoping – iza tamin'izy ireo no nahay niteny Mandariny tsotra?
Mieritreritra aho fa tokony havela handeha mora sy halalaka ny tenim-paritra. Fomba handrosoana ny famelàna ny olona handray fanapahan-kevitra amin'izay zavatra iainany ankehitriny. Ny mila dinihina dia ny hoe tena mikendry ny hanafoana ny kolotsaina any an-toerana tokoa ve ny soso-kevitra ofisialy amin'ny fampiasana ny teny Mandariny.